Manufacturers & Suppliers Tourmaline - Ozinina Tourmaline China
Shina orinasa fotsy Tourmaline Powder mpamatsy ho an'ny tsy tenona
Inona no azontsika atolotra anao?
1. 7 * 24 ora fanompoana.
2. santionany maimaim-poana
3. fanohanana ara-teknika
4. serivisy fanadiovana manokana
Tourmaline Sand Black Tourmaline Crystal ho an'ny fikarakarana rano fisotro
1. Fitaovana fanadiovana rano sy rivotra.
2. Antibacterial coating ary ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika an-trano.
3. Natao seramika mitambatra miaraka amin'ny asan'ny sterilization antibacterial sy deodorization.
4. Ny tourmaline dia azo ampiasaina amin'ny fambolena mba hanafohezana ny fotoam-pambolena.
Ion avo lenta ratsy vovoka anion vovoka miaraka amin'ny famoahana avo ho an'ny indostrian'ny lamba
Ny vovony seramika lavitra infrarouge dia afaka mamoaka taratra infrarouge lavitra kokoa (avo kokoa ny emissivité infrarouge) noho ny zavatra mahazatra. Any amin'ny faritra mafana indrindra, dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamainana ny boiler, ny fandoroana ny loko, ny fanamainana sy ny fanamainana ny hazo sy ny sakafo, sns.; ao amin'ny faritra ara-dalàna ny mari-pana, dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana fitaovana isan-karazany infrarouge mafana insulation, toy ny lavitra infraroda seramika vovoka, lavitra infraroda seramika fibre, lavitra infraroda seramika polyester, ary lavitra infrared seramika Functional, sns Far. Infrared seramika coating (anisan'izany ny nano titane oxide coating) manana catalytic oxidation asa.
2021 Ion vovoka ratsy ho an'ny kilasy kosmetika
2021 angovo ion ratsy vovoka anion vovoka ho an'ny karatra
2021 négatif ion angovo vovoka anion vovoka négatif amidy
Energie negative powder anion powder amidy
Ion-negatif vovoka anion vovoka ho an'ny loko / coating
vovoka anion, izay afaka mamoaka ion avy amin'ny 1000-70000 cm2/ion/s. azo ampiasaina handokoana, garnet, vera, gorodona, biriky, lamba, saron-tava, masterbatch sns, tamin'ity taona ity, ny vokatra ratsy ion dia malaza kokoa. Manampy ampahany kely amin'izany dia afaka manala fofona hafahafa sy manadio entona.
White Nano Tourmaline Powder ho an'ny loko / coating
Nano Tourmaline vovoka fampiharana:
Masterbatch, loko fotsy, masterbatch elektronika, saron-tava tsy voatenona, saron-tava mitsonika, loko, indostrian'ny coating sns.
Pigment fotsy tena tsara ho an'ny masterbatches
Masterbatch, loko fotsy, masterbatch elektronika, saron-tava tsy voatenona, saron-tava mitsonika.
Vovoka Electret Tourmaline ho an'ny Mask Meltblown